Construction Company တစ်ခုတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်...
ရှစ်ထပ်အဆောက်အဦးအတွက် လိုအပ်သောတံခါးများ MDF Door 2'x6"x7" Steel Door 3'x3"x7" PPC Door 2'x3"x6' 1/2 Main Door ကို ကျွန်းသစ်နဲ့လိုချင်လို့ ရိုးရိုးကျွန်းသား ကျွန်းပေါင်းသား တံခါးဆိုဒ် 3'-3"x7' ရိုးရိုးသစ်သားတံခါး 2'-6"-6'(or)7' လိုအပ်သည့်အရေအတွက် အိမ်ခန်း ၃၂ ချပ် အိမ်သာ ၁၆ချပ် ရေချိူးခန်း ၁၆ ချပ်
Posted Date :20-Aug-2019
နေပြည်တော်ကောင်စီက ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအချို့ ဆောင်ရွ...
နေပြည်တော်ကောင်စီက ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအချို့ ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၈ နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအချို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ (က) နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၇၆)လုံး ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊ ( ခ) ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ဟိုတယ်ဇုန်ရေပေးရေးဝင်းအတွင်း ဂါလန် (၂)သိန်း ရေကြည်စုကန် (၁)လုံး တည် ဆောက...
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် စောင့်ြ...
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးစနစ် (Customs Logistics Surveillance System) E-Lock အား လုပ်ဆောင်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၉ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၌ ကုန်စည်တင်သွင်း၊ တင်ပို့မှုလမ်းကြောင်း တွင် ကုန်တင်ယာဉ်များ သွားလာမှုနှင့် တရား မ၀င်ကုန်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းမှုအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစနစ် (Customs Logistics Su...
Posted Date :29-May-2019
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ ဆီပြာနှင့် စီဂျီအို ရောင်း...
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ ဆီပြာနှင့် စီဂျီအို ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၈ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ အမှတ် (၂) ၊ ရေနံချက်စက်ရုံ (ချောက်)မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆီပြာ (Blue Oil) (၉၅၁၆၄) ဂါလန် (ဂါလန်ကိုးသောင်းငါးထောင်တစ်ရာခြောက်ဆယ့်လေးတိတိ)နှင့် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု (သံပရာကန်)မှ ထုတ်လုပ်သည့် စီဂျီအို (CGO) (၅၀၀၀၀၀) ဂါလန် (ဂါလန်ငါးသိန်းတိတိ)တို့အား တင်ဒါခေါ် ယူရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာရေန...
ညောင်လေးပင်ဘူတာ အဆင့်မြှင့်တင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဖြူးဘူတာ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် မြန်မာ့မီးရထားက တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၇ ညောင်လေးပင်ဘူတာ အဆင့်မြှင့်တင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဖြူးဘူတာ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် မြန်မာ့မီးရထားက တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ တင်ဒါအမှတ် ၁၈၇/မမ/CE ဖြင့် ညောင်လေးပင်ဘူတာ အဆင့်မြှင့်တင်မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အဆင့်မြှင့်မွမ်းမံမ...
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌ...
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးလက်လမ်း/တံတား လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၇ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးလက်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီန...
Posted Date :23-Jun-2019
Expire Date :23-Jun-2019
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရ...
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းအား ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၄ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းအား ဌာနအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါ သဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည...
Posted Date :16-Jun-2019
Expire Date :16-Jun-2019
ပဲခူးမြို့၊ ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်၏ ဆက်စပ်မြေဧရိယာပေါ်တွင် H...
ပဲခူးမြို့၊ ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်၏ ဆက်စပ်မြေဧရိယာပေါ်တွင် Historical Park အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် EOI ခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၀ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်၏ ဆက်စပ်မြေဧရိယာ ၃၄ ဒသမ ၆၆ ဧကရှိ မြေလွတ်ပေါ် တွင် Historical Park အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအား စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို မိမိတို့ ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းအချက်အလက်တ င်ပြချက်များနှင့်အတူ (၁.၆.၂...
Posted Date :01-Jul-2019
Expire Date :01-Jul-2019
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် မြ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် မြို့နယ်ရှိ ယာယီစခန်းများတွင် နေရာချထားနိုင်ရေး အတွက် ယာယီအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် မြို့နယ်ရှိ ယာယီစခန်းများတွင် နေရာချထားနိုင်ရေး အတွက် ယာယီအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန် တိုင်းရင်းသားပိုင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ ရသေ့...
Posted Date :27-May-2019
Expire Date :27-May-2019
ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၄)ခုအား တင်ဒါခေါ်
ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၄)ခုအား တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁ ၂၀၁၈-၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခြေခံ ပညာ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးအောက်တွင် ရန်ကုန်တို င်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျောင်းဆောင် သစ်တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၄)ခုအား တင်ဒါ(အိတ်ဖွင့်) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချ...
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လက်ပံတန်း) တွင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်...
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လက်ပံတန်း) တွင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၀ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရစက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ (လက်ပံတန်း) တွင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ် ခေါ်ထားသည်။ လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မည့်နေရာမှာ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လက်ပံတန်း) တွင် ၁၂၀ ဆံ့ ကျောင်း...
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ တည်ဆဲအကောက်ခွန်ဥပဒေအရ အရေးယူထားသော...
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ တည်ဆဲအကောက်ခွန်ဥပဒေအရ အရေးယူထားသော အ၀တ်အထည်၊ ဆိုင်ကယ်အပို ပစ္စည်းနှင့် ဘောလ်ပင်များအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၀ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ တည်ဆဲအကောက်ခွန်ဥပဒေအရ အရေးယူထားသော အ၀တ်အထည်၊ ဆိုင်ကယ်အပို ပစ္စည်းနှင့် ဘောလ်ပင်များအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချသွား မည်ဖြစ်သည်။ (၃၀.၅.၂၀၁၉) ရက် (၁၀)နာရီအချိန်တွင် မြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီး ဌာန၊ သစ်တော...
Expire Date :29-May-2019
အဆောက်အအုံ/လမ်း/တံတား အရည်အသွေး စစ်ဆေးတိုင်း တာရေး ဓာတ်...
အဆောက်အအုံ/လမ်း/တံတား အရည်အသွေး စစ်ဆေးတိုင်း တာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများအား ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၅ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ)ရုံးတွင် အဆောက်အအုံ/လမ်း/တံတား အရည်အသွေး စစ်ဆေးတိုင်းတာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စစ်ကို...
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် ရေနံတူးဖော်/ထ...
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် ရေနံတူးဖော်/ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၄ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် ရေနံတူးဖော်/ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ (က) တင်ဒါအမှတ် DMP/L-212 (18-19) ၊ Electrical Spares for ZJ 50 D Sr Rigs (17) Items ( ခ) တင်ဒါအမှတ် DMP/L-213 (18-19) ၊ Electric...
Posted Date :13-Jun-2019
Expire Date :13-Jun-2019
အဆောက်အအုံ လမ်း/တံတား၊ တာတမံ Design ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း...
အဆောက်အအုံ လမ်း/တံတား၊ တာတမံ Design ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူ ရန်ကုန်၊ မေ ၁၃ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဒီဇို်င်း Specification ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတို့ ပြီးပြည့်စုံမှ တင်ဒါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၍ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်ပြီး စိတ်ဝင်စား သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊...
ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အခ...
ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အချို့အတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၀ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုခရိုင်၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း (မူလ) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် (၆)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်သံကူကွန်ကရစ် (၁)လုံး (၅၀ %) အစား ဒေသအဆောက်အအုံဖြစ်သည့် (သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ) (၄)ခန်းတွဲ (၁)ထပ် (၂)လုံးနှင့် အရ...
အစိုးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းေ...
အစိုးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းေ ဆာင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၀ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစိုးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသော ကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ (က) ၅၀ ဆံ့ ကျောင်းသား/သူဆောင် (ပေ ၁၃၀ ပေ x ၈၇ ပေ) တစ်လုံး RC (၂)ထပ် တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်မှာ (၁၃.၅.၂၀၁၉) ရက်...
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (ရေအ...
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (ရေအရင်းအမြစ်)မှ ဒီဇယ်ဆီဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၀ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (ရေအရင်းအမြစ်)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရရန်ပုံငွေဖြင့် ဒီဇယ်ဆီဝယ်ယူအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ တင်ဒါပုံစံတင်ရောင်းချမည့်ရက်မှာ (၁၀.၅.၂၀၁၉) ရက်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါပုံစံအရောင်...
Expire Date :22-May-2019
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သန်လျင်) နှင့်(တောင်ဒဂုံ) တည်ဆော...
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သန်လျင်) နှင့်(တောင်ဒဂုံ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၉ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သန်လျင်) နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (တောင်ဒဂုံ) တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါယူထားသည်။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစ...
Posted Date :07-Jun-2019
Expire Date :07-Jun-2019
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ စက်သုံးဆီ ၀ယ်...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ စက်သုံးဆီ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ မေ ၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလမှ စက်တင်ဘာ လအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်) (၂၄၀၀၀၀) ဂါလန်အား သာမန် အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် မြို့အသီးသီးတွင် ၀ယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ (က) မန္တလေးမြို့အတွက် ဆီ (၁၂၈၁၂၄...
Posted Date :28-May-2019
Expire Date :28-May-2019